Huchenjeri Kubva kuWiricheya: FDR Resource Nongedzo | Karman® Mawiricheya
Huchenjeri Kubva kuWiricheya: FDR Resource Nongedzo
Posted on July 16, 2013 January 7, 2021 by csr 1687
Kunyangwe paine hutano hwake hwakawanda, kusanganisira chiuno-pasi kuoma mitezo, vanhu vanoona Franklin D. Roosevelt (FDR) seMutungamiri mukuru munhoroondo yeAmerica. Achitenda kuti hutano hwake hwaizomuita kuti aoneke asina kusimba kune vekunze uye kunetseka neruzhinji rweAmerican, FDR kashoma yaizobvumidza vafotori kuti vamuratidze mune yake wiricheya, uye akaedza zvakanyanya kuviga zvimwe zvirwere. Kunyangwe mune yake murombo ezvinhu, Mutungamiri Roosevelt akachinja maratidziro ehukama eAmerica, uye akabatsira kubata pasangano rakakura kwazvo rekuchengetedza runyararo pasi rose - United Nations. Izvi zvinotevera zvinongedzo zvichaita zvinopa biographical ruzivo, zvirongwa zvedzidzo, gwara rekufunda uye ruzivo pane nhaka yeDRR, pamwe nekuverenga kwakakurudzirwa.
Pfupiso Biografikhi yeFDR
Nhoroondo yeFDR: Ichi chinyorwa chinopa unhu biography yaFranklin D. Roosevelt, kusanganisira makore ekutanga ehupenyu hwake.
Pfupi Biography: Nhoroondo pfupi yeFDR.
White House Biography Iyi ipfupi biography kubva kuWhite House inotsanangura hupenyu hwemutungamiri wemakumi matatu nemaviri weAmerica.
Innagural Kero: Iyi webhusaiti ine biography yeFDR, pamwe nehukama kune ake mana ekutanga kero.
Mutungamiriri Akakurumbira: Iyi webhusaiti inopa zvishoma nezve uyu mutungamiri ane mukurumbira, pamwe neiyo pfupi biography.
Columbia's Biography: Iyi biography inobva kuColumbia University, uko Mutungamiri Roosevelt akaenda kuchikoro.
Chidzidzo cheRusununguko China Iyi webhusaiti inopa zviwanikwa, zvirongwa zvedzidzo uye zviitiko zvekufunda izvo zvina rusununguko.
Ichi chidzidzo chirongwa chinotarisa kuhurema kwaMutungamiri Roosevelt, kudzidzisa vadzidzi nezvekuti akavanza sei hurema uye nekuvakunda.
FDR Uye Dare Repamusorosoro: Izvi zvidzidzo zvina zvinodzidzisa vana nezvekuti FDR yaibata sei nevanhu vayo uye nedare redzimhosva.
The New Deal: Ichi chirongwa chechidzidzo chinotarisa pane New Deal, kubatsira vadzidzi vepuraimari kuzvinzwisisa.
Iyo Yakanyanya Kushungurudzika uye FDR: Inopa chirongwa chechidzidzo pamusoro peKushungurudzika Kukuru uye nemabatiro avakaitwa neMutungamiri Roosevelt.
Depression Great: Inotarisa pamabatiro akaita vanhu vekuAmerican kushushikana kukuru uye nemabatiro avakaita FDR.
Dare Repamusoro: Inotarisa kuti sei FDR yaida kushandura Dare Repamusorosoro kuti ibatsire kuchengeta Chitsva.
FDR Yekufunda Guides
Makumi mana eRusununguko Kudzidza Nhungamiro: Inotarisa pane rusununguko rwune rweDRR: kutaura, chinamato, rusununguko kubva mukuda uye rusununguko kubva mukutya.
FDR Yekutungamira Yekutungamira: Iyi webhusaiti inopa mibvunzo yekudzidza uye mazano ezvinyorwa zvekutarisa kwevadzidzi kuna Mutungamiri Roosevelt.
FDR neHondo Iri gwaro rekudzidza rinopa makumi mashanu nemashanu mibvunzo yekudzidza nezve Hondo neMutungamiri Roosevelt.
Tsaona ya1929: Iri gwaro rekudzidza rinotarisa panguva chaiyo pamberi uye shure kwekuderera kukuru.
Vanhu vanowanzo rangarira Mutungamiri Roosevelt nekumisikidza kwake kweNew Deal. Iyo Nyowani Deal yaive seti yemagariro mapurogiramu akaitirwa kubatsira iyo veruzhinji veruzhinji panguva yeKukuru Kushushikana. Pfungwa yake yesangano rinochengeta runyararo yakapa nzira kutanga kweUnited Nations. Kunyangwe, izvi hazvina kuitika kusvikira mushure mekufa kwake kamwe kamwe. Aive mutsigiri akasimba kudaro weVakomana Scouts. Akazove Mutungamiriri we New York Vakomana Scouts, vachienda kumabasa akati wandei panguva yehutungamiriri hwake. Vanyori venhoroondo nevanoongorora vanofunga Roosevelt mumwe wevatungamiriri vakanakisa uye vane mukurumbira muAmerican History, mukubatana naGeorge Washington naAbraham Lincoln.
Kukwazisa Vakomana Scouts Ichi chinyorwa ndechaFDR yekutaura kune boka reBoy Scout muna 1943.
FDR Inorumbidza Vakomana Scouts Iyi faira yekuteerera yeDRR inorumbidza Vakomana Scouts.
Nyowani Dhata Tsika Zvirongwa Ichi chinyorwa chinodonongodza akati wandei masocial program muFDR's New Deal.
Iyo Nyowani Deal uye WWII Ichi chinyorwa chinotsanangura kuti FDR yakatanga sei iyo Nyowani Deal uye yaibata WWII panguva imwe chete.
FDR uye United Nations Ichi chirevo chinotsanangura kuti sei uye nei FDR yakatsanangura pfungwa iri kuseri kweUN, kunyangwe isina kurarama kwenguva yakakwana kuti ione.
Kuwedzera kwaRoosevelt kweMutungamiri Ichi chinyorwa chinotsanangura mashandisiro akaita FDR mashandiro anoita Mutungamiriri weAmerica, uye anotsanangura ake asina kujairika makore gumi nemaviri ari muhofisi.
Muna 1921, pamberi pehutungamiriri hwake, FDR yakabata chakazofungidzirwa kuti poriyo, ikava mitezo kubva muchiuno zvichidzika. Mumakore akatevera, kuongororwa uku kwakakurukurwa zvakanyanya, nevazhinji vachitenda kuti aitova neGuillain Barre syndrome. Kubva zvaakaremara, FDR yakaitwa mishonga isingaverengeke, ichiramba kugadzikana nekuremara, kana kuzvidzidzisa kufamba nzendo pfupi. Anotendwawo kuti anga aine chirwere cheBP, kupererwa neropa, uye pamwe melanoma.
Kuremara uye nehunyengeri Chinyorwa ichi chinotsanangura zvakawanda maronda emutungamiriri wenyika makumi matatu nemaviri uye kuti akazvivanza sei kubva kuvanhu veAmerica.
Rufu rweFDR: Chinyorwa ichi chinotsanangura kuti FDR yakafa riini uye sei, kusanganisira kufungidzira muzvinhu zvake zvehutano.
Mutungamiri Anofa: Chinyorwa ichi chinotsanangura mashandiro anoita avo vanoshanda neDRR nehutano hwake hwairwara.
Kukwira kwaTheodore Roosevelt: Iri bhuku, rakanyorwa naEdmund Morris, rinotsanangura kuti FDR yakava sei mutungamiri wechi32 weUnited States.
Zvinyorwa zvaRoosevelt: Iyi webhusaiti inopa runyorwa rwezvinyorwa zveFDR.
Na uye About: Iri webhusaiti rinotsanangura zvese zvemabhuku akanyorwa uye nezveMutungamiri Roosevelt.
Mabhuku Akanaka: Raibhurari yeAmerica inokurudzira aya mabhuku matatu achitarisa kunaMutungamiri Roosevelt.
Theodore Roosevelt Unganidzo Iyi webhusaiti inopa runyorwa rwemabhuku, mifananidzo uye zvinoratidzira zvese nezveMutungamiri Roosevelt.
Hutungamiri hweTheodore Roosevelt Iri bhuku, rakanyorwa naLewis L. Gould, rinotsanangura hutungamiriri hwaFranklin Roosevelt.
Mabhuku uye Zvinyorwa Iyi webhusaiti inopa yakazara runyorwa rwehuwandu hwemabhuku uye zvinyorwa zvakanyorwa nezvaTheodore Roosevelt.
Zvinyorwa uye edhisheni Iyi webhusaiti inopa yakadzama runyorwa rweese ezvinyorwa uye edhisheni zvakanyorwa neFDR.
Kana iwe ukaona ichi chinyorwa chichibatsira, ndapota sununguka unzwe kuti ubatanidze kana kuishandisa zvakare. Zvese zvatinokumbira ndeyekuti chikwereti chidzokere kune yedu saiti.Ichi chinyorwa chinounzwa kwauri ne 1800wiricheya - The hwiricheya chitoro.
Mawiricheya Zviwanikwa - Iyo Akaremara Kufamba Nhungamiro